अहिले सम्म कै सबै भन्दा ठुलो “# मु*ला” भन्ने उपाधि पाएको जानकारी: डा. पुन – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
अहिले सम्म कै सबै भन्दा ठुलो “# मु*ला” भन्ने उपाधि पाएको जानकारी: डा. पुन
काठमाण्डौं। पढ्न चाहिं धेरै नै पढेको तर मानिसमा हुनु पर्ने मानवीय हृदय अथवा चि*त्त चाहिं चाहिने भन्दा सा’ह्रै नै कम भएको एक जना भा’इले उनै को फे*सबुक पेजमा लेखेको तलको कुरा पढ्नु होस्।
मैले हिजो अमेरिकामा कार्यरत डा. निरन्जन अर्याल भाईले कोरोनाको बिरामी जाँ’च्न नेपालमा यसो पनि गर्न सकिन्छ नि भनेर भनेको कुरालाई मेरो फे’सबुक पेजमा शेयर गरेको थिएँ ।
मैले त्यसलाई समर्थन गर्दै नेपालमा त्यस्तो काम गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि सकेको आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्नेछ र सम्बन्धित बि*ज्ञहरु अघि बढ्नु होस भनेर पनि लेखेको थिएँ. लौ पढ्नु होस् र लक्डाउनले दिक्क लागेको बेलामा मज्जाले हाँसु होस्।
“अति भो, महाबीर पुन लाई के आग्रह छ भने ड्रोन बनाए जस्तो, बाँदर धपाउने मेसिन बनाए जस्तो, सेलरोटी बनाउने मेसिन बनाए जस्तो सजिलो छैन कोरोनाको किट वा भ्यासिन नेपालमा बनाउन । तपाईंको आबिस्कार केन्द्र हेरी सके को हुनाले, जैविक प्रविधि (‌Biotechnology) बारे अब देखि नबोल्दा बेस होला। यसैमा तपाईको र तपाईंको केन्द्र को भलो देख्छु । # मुला”
यो माथिको कुरा लेख्ने भा”ईको नाम अति गोप्य राखेको छु. कसैले उनलाई चिन्नु हुन्छ भने पनि गो*प्य नै राखी दिनु होला।
किन भने उनले पनि त ठुलो हृदय अथवा चित्त बनाउने मौका पाउनु पर्छ नि. # मु**ला भन्ने उपाधि दिएको मा भाई लाई धेरै धन्यबाद!
Previous मृ*त्‍युको स’पना, म’लामी, शँ*ख र आ*र्यघाट : राम प्रसाद खनाल
Next चैत्र म’हिनाको भा*डा लिए का*रबाही हुन्छ : मन्त्री ख’तिवडा